Snapdragon 835 chip dia naseho tao amin'ny CES any Las Vegas | Vaovao momba ny gadget
Qualcomm dia mampahafantatra ny Snapdragon 835 miaraka amina core valo, Quick Charge 4.0 ary bebe kokoa ao amin'ny CES
Manuel Ramirez | | Gadgets, About us
Qualcomm dia farany namoaka ny fiasa rehetra an'ny chip flagship amin'ity taona 2017 ity ary ho hitantsika amin'ny lisitry ny fitaovana avo lenta izay haseho amin'ny tapaky ny taona. Taorian'ny nanambarana azy tamin'ny Novambra, efa nanolotra izany ao amin'ny CES any Las Vegas.
Tao anatin'ny iray amin'ireo teny fototra voalohany tamin'ny CES 2017 izy io, rehefa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny chip Snapdragon 835 i Qualcomm. Natokana ho tonga amin'ny onja voalohany an'ny fitaovana Android, azon'ny mpampiasa antenaina Hitsambikina 20% amin'ny lahasa isan-karazany CPU, fanatsarana ny angovo ary fanohanan'ny Quick Charge 4.0.
Ny Snapdragon 835 dia malaza amin'ny fampihenana ny fizotry ny famokarana manomboka amin'ny 14nm ka hatramin'ny 10nm. Izany dia miteraka fampihenana angovo 25 isan-jato mihoatra ny 820. Naseho koa fa misy fihenan'ny 50% amin'ny fanjifana angovo raha ampitahaina amin'ny 801 3 taona lasa izay.
Qualcomm dia naneho hevitra momba ny olo-malaza tena mahaliana toa ny iray andro niresahana, mihoatra ny 5 andro ny playback audio ary hatramin'ny 7 ora ny filalaovana atiny 4K.
Fanohanana an'i Quick Charge 4.0 dia manome hery 5 ora rehefa mifandray amin'ny loharanom-pahalalana mandritra ny 5 minitra. Ity kinova vaovao amin'ny chip ity dia manolotra amin'ny 4.0 hatramin'ny 20 isan-jato ny sarany haingana ary mitazona ny mari-pana amin'ny 5 degre Celsius.
Ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe indrindra amin'ny 820 sy 821 an'ny 2016 dia ity amin'ity chip ity intelo lasa Kryo 280 izay hampiasa ny maritrano lehibe.LITTLE ho an'ny fampitomboana 20% ny fampidinana ny fampiharana, ny fitetezana tranonkala ary ny VR.
Cores efatra avo lenta izay azo apetraka ho iray famantaranandro haingana hatramin'ny 2,45 GHz, raha ny ambiny kosa dia hiakatra hatramin'ny 1,9GHz hahatratra "cluster efficace" izay 80% amin'ny fotoana fanodinana no hatao.
Amin'ny lafiny fampisehoana GPU na sary, ny Adreno 540 dia manohana ny fampisehoana 4K @ 60fps miaraka amin'ny famolavolana sary 25 isan-jato avo kokoa. Ny Hexagon 690 DSP tompon'andraikitra amin'ny fanodinana signal digital dia manohana an'i Google TensorFlow, izay mamela ny asa fianarana amin'ny milina amin'ny fitaovana, toy ny fanekena ny feo sy ny zavatra, ny fanarahan-dia ny fivezivezena ary ny fanamarinana biometrika.
Fomba hafa ampidiro ny modem X16LTE ary nanatsara ny fanodinana fakan-tsary. Amin'ny lafiny fifandraisana, misy ny fanohanana ny fanangonam-bokatra 4x, 4 × 4 MIMO, Bluetooth 5.0 ary 802.11ad Wi-Fi, ary koa ny fanatsarana mitambatra ho an'ny zoom kokoa, ny fifantohana mandeha tsara ary ny fanamafisana ny horonantsary.
La tapany voalohany amin'ny 2017 ireo smartphone rehetra izay mitondra azy io ao anaty vavony dia haseho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » Qualcomm dia mampahafantatra ny Snapdragon 835 miaraka amina core valo, Quick Charge 4.0 ary bebe kokoa ao amin'ny CES
Samsung dia voamarina fa handroso miaraka amin'ny Note 8, haseho amin'ny volana septambra
Telegram koa dia mijanona tsy manohana ny kinova Android alohan'ny 4.0